QuizUp 4.0.8 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.0.8 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား ဥာဏ္စမ္း QuizUp
QuizUp ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ကမ္ဘာနှစ်ခုရဲ့အကောင်းဆုံးရှိကြောင်းပျော်စရာ, စွဲလမ်း, စိန်ခေါ်မှု, အွန်လိုင်း trivia ။
သေချာတာပေါ့, သင်တို့ရှေ့မှ trivia ကစားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်က, သင့်အကြိုက်ဆုံးခေါင်းစဉ်ပေါ်တွင်သင်၏အကျိုးစီးပွားအကြောင်းကို post သင့်ကိုယ်ပိုင်ပဟေဠိဖြစ်စေတစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်, သင့်အကျိုးစီးပွားဝေမျှသူကိုအသုံးပြုသူသန်းပေါင်းများစွာနှင့်အတူချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ trivia ကစားကြသနည်း
လူမှုရေးကွန်ယက်နှင့် trivia- QuizUp ပေါင်းစပ်တဲ့ဦးနှောက်ကြော်ငြာတိုအတွက်ကစားသမားသန်းပေါင်းများစွာ Join!
သငျသညျမှာအကောင်းဆုံးပါပဲ, Learn ကြီးထွားခြင်းနှင့်အကျိုးစီးပွားအပေါ်အွန်လိုင်းမိတ်ဆွေများနှင့်ကစားသမားစိန်ခေါ်ပျော်စရာရှိသည်။
ပိုပြီးဘာလဲ? သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးခေါင်းစဉ်မှာကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးနေသက်သေပြကြောင်းတံဆိပ်များ Play နှင့်ဝင်ငွေ
သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်ကျပန်းပြိုင်ဘက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှယေဘုယျအသိပညာကနေအထိအကြောင်းအရာများ၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံအတွက်, အမှတ်တံဆိပ်များ, အားကစား, ဟယ်ရီပေါ်တာ, ဒစ္စနေး, action ကိုရုပ်ရှင်များ, အင်တာနက်, ဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်ပိုပြီးစိန်ခေါ်နေချိန်မှာအမြန်တစ်လက်သည်း-ကိုက်ဘို့, အွန်လိုင်း Play အသေးအဖွဲများ, Real-time ပွဲ။
တစ်ခုချင်းစီကိုပဟေဠိခေါင်းစဉ်သင်, post ကိုဆော့ကစားရာ၌ဝါကြွားနှင့်သင့်အကျိုးစီးပွားများကိုမျှဝေသောသူတို့နှငျ့အတူအပြန်အလှန်နိုင်ပါတယ်တဲ့အမျိုးအစားအတွင်းသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲကြောင်းမှ Add!
•တွေ့ဆုံ & အသစ်သောလူတို့နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်။
•သင်အကြောင်းပြောဆိုနိုင်ပါတယ်အကြောင်းအရာများအတွက်ရုတ်တရက်တိုး။ (Yasss! ရေခဲပြင်-ခြိုးဖောကျကျွမ်းကျင်မှု။ )
web ပေါ်မှာ QuizUp ပျော်မွေ့: http://www.quizup.com
© 2016 Glu မိုဘိုင်း Inc ကို All Rights Reserved
QuizUp အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
QuizUp အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
QuizUp အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
QuizUp အား အခ်က္ျပပါ
zikyhd စတိုး 297 55.57k
QuizUp ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း QuizUp အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.0.8
ထုတ်လုပ်သူ Plain Vanilla Games Corp
လက်မှတ် SHA1: F6:44:FF:83:B3:4C:35:31:88:A2:90:60:03:04:EC:1D:B3:91:15:1A
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Plain Vanilla
အဖွဲ့အစည်း (O): Plain Vanilla
QuizUp APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ